Mmekọahụ Mmebi Hormones ntụle nhazi usoro - AASraw ntụ ntụ
/ ngwaahịa Mmekọahụ Mmekọahụ Mmekọahụ
Mmekọahụ na-agụnye ihe ndị e kere eke na ogige ọgwụ. Na ụlọ ọrụ anyị, anyị na-ewebata ụfọdụ ihe onwunwe nke ngwaahịa a na-ahụkarị na ahịa.
'Smụ nwanyị etrogen, progesterone, na testosterone na-adabaghị na afọ, ọkachasị n'oge na mgbe ha kwụsịchara. Chọpụta ụzọ iji mee ka agụụ mmekọahụ gị ghara ịnwe, ọbụlagodi ogo gị dị ala. Na, maka ụfọdụ ụmụ nwoke, yana afọ na-etolite, agụụ mmekọahụ na-agbada. Na, karịchaa, ụfọdụ ụmụ nwoke nwere nsogbu nrụrụ na-erectile. Iji ọgwụ ndị na-eme ka nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ, nyere ha aka ịnụ ụtọ ndụ, ma ọ bụ ndụ ka mma.
Erectile dysfunction (nkwarụ) bụ enweghị ike ịchọta ma nwee ụlọ nrụpụta zuru oke maka inwe mmekọahụ.
Inwe nsogbu site n'oge ruo n'oge abughi ihe kpatara nchegbu. Ọ bụrụ na nrụrụ erectile bụ nsogbu na-aga n'ihu, agbanyeghị, ọ nwere ike ibute nrụgide, metụta ntụkwasị obi gị na itinye aka na nsogbu mmekọrịta. Nsogbu inweta ma ọ bụ idebe ụlọ nwere ike bụrụ ihe ịrịba ama nke ahụike na-apụtaghị ìhè chọrọ ọgwụgwọ na ihe egwu nke ọrịa obi.
Ọgwụgwọ dabere na ihe kpatara ya.
Mmega ahụ, karịsịa mmega ahụ igwu egwu na-adị irè maka igbochi ED; eme ihe dị ka ọgwụgwọ na-enyocha. Maka ụtaba na-ese siga, njedebe na-arụpụta ihe dị mma.
Ogwu pharmacotherapy na ihe mkpofu ihe nro bu ntanye nke mbu, tinyere injections nke ọgwụ di n'ime penis, na penile implants.
Ndị PDE5 inhibitors sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra) na tadalafil (Cialis) bụ ọgwụ ọgwụ ndị e ji ede ọgwụ.
Ejirila DDAIP na-ejikọta ihe na-emepụta ihe ọ bụla na Canada ka ọ bụrụ usoro nhazi nke mbụ maka nrụrụ erectile.
Otu n'ime ọgwụ ndị na-esonụ nwere ike ịbanye n'ime penis: papaverine, phentolamine, na prostaglandin E1.
Sildenafil / Sildenafil Citrate (viagra) bụ ọgwụgwọ maka ED. Ọ na-enyere gị aka isi ike mgbe oge ruru. Ikwesighi iga 6 rue etiti abali site na iwere ya.
Tadalafil / Cialis bụ ọgwụ na-eme ka ọ dị irè ngwa ngwa, obere usoro ọgwụgwọ, ogologo oge.
N'akwunye ndị ahụ, ekwenyere Dapoxetine HCL iji nyere nwoke aka inwe ogologo oge mgbe ọ na-enwe mmekọahụ, mgbe ejiji ya na cialis ma ọ bụ viagra.
Mgbe ị nara otu mbadamba nkume, ụfọdụ n'ime ihe mgbochi nke CIALIS na-anọgide n'ime ahụ gị maka ihe karịrị 2 ụbọchị. Ihe mgbochi nwere ike ịnọgide na-abawanye ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na akụrụ ma ọ bụ imeju, ma ọ bụ na ị na-ewere ọgwụ ndị ọzọ.
Ngwọta Ndị Ọzọ Ọ Pụrụ Imetụta CIALIS?
Gwa onye na-enye gị ahụike banyere ọgwụ niile ị na-ewere, karịsịa:
ọgwụ ndị a na-akpọ "nitrates" nke a na-enyekarị maka mgbu obi
ọgwụ ndị a na-akpọ guanylate cyclose stimulators ji agwọ ọrịa ọbara mgbali elu na ọbara mgbali elu na-anaghị ala ala
a na-emekarị ka ndị na-ahụ maka mkpụrụ akwụkwọ na-ahụ maka nsogbu prostate
ọgwụ mgbali elu
ọgwụ maka nje HIV ma ọ bụ ụfọdụ ụdị ọgwụgwọ nkwonkwo ọnụ
ụdị ọgwụ nje ụfọdụ dị ka clarithromycin, telithromycin, erythromycin (ọtụtụ aha dị iche iche, biko kpọtụrụ onye na-ahụ maka ahụike gị iji chọpụta ma ị na-ewere ọgwụ a)
ọgwụ ndị ọzọ ma ọ bụ ọgwụgwọ maka arụmọrụ erectile (ED)
CIALIS na-erekwa dịka ADCIRCA maka ọgwụgwọ ọbara mgbali elu nke ọbara. Ejula ma CIALIS na ADCIRCA. Ejila CIALIS mee sildenafil citrate.